होर्डिङ होयक्स ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ चैत्र १५ गते शुक्रबार १४:२७ मा प्रकाशित
पोखरा महानगरले यहि चैत ५ गतेदेखि पोखराभित्रका विभिन्न ठाउँमा राखिएका विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु ग¥यो । स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानमा रहेको पोखरा महानगरले स्मार्ट डिजिटल बोर्ड राखेर विज्ञापन राख्ने निर्णय गर्दै होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको हो ।
यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले २६ लाखमा पोखराभित्रको विज्ञापनको ठेक्का लिएको थियो । पोखरा महानगरले पनि आफूले काम नगरी मनोज चौहानको कम्पनीलाई सुम्पेको थियो ।
यसो गर्ने बेलामा पनि मनोज चौहानले उवासंघ र महानगरसँग ठूलै राजनीति खेलेका थिए । उक्त ठेक्का सम्झौताको समयावधि सकिएपछि महानगरले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नै नगरी होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु ग¥यो ।
मनौज चौहानलाई सुम्पिएपछि होर्डिङ विवादमा तानिएको महानगर पुनः डिजिटल बोर्ड राख्ने भन्दै होर्डिङ च्यातेपछि विवादमा तानिएको छ । आखिर, यो होर्डिङ बोर्ड बारे भइरहेको ‘होयक्स’ अर्थात ‘छल’ के हो ?
पोखरा महानगरले यसअघि नै डिजिटलको नाममा ट्यूबलाइट वाला विज्ञापन राखेर झुटको खेती सुरु गरिसकेको छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने केहि दिनअघि सुरु गरेको होडिङ बोर्ड हटाउने अभियानमा पोखरा महानगर फसिसकेको छ ।
महानगरले पोखरा महानगरलाई साँच्चीकै स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने हो भने नेपाल सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको, विज्ञापन गर्नै नपाइने तर, विज्ञापन गरिरहेका मादक पदार्थका विज्ञापनहरु हटाएर अभियान सुरु गर्न सक्थ्यो । न कि अब गर्न लागेको जस्तो बिना प्रतिस्पर्धा आफूले रोजेको व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएर र अरु विज्ञापन हटाएर ।
मनोज र महानगर कनेक्सन
महानगरले होर्डिङ बोर्ड च्यात्न सुरु गरेको दिन चैत पाँच गते परिचय एड्भर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक बस्यालसँग चौहानले फोन वार्ता गरेका थिए । फोनमा चौहानले बस्याललाई अहिले भएका होर्डिङबोर्डको कर तिर्न आग्रह समेत गरेका थिए । जवाफमा बस्यालले हटाउने बोर्डको कर नतिर्ने र तिर्न परे महानगरसँग समन्व्य गरे तिर्ने भनेको बए ।
तर, बस्यालसँग कुरा गरेलगत्तै चौहाने पोखरा महानगरका केहि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई फोन गरेका थिए । त्यसको केहि घण्टामा उनै बस्याल प्रबन्धक निर्देशक रहेको परिचय एड्भर्टाइजिङ कम्पनीले राखेको होर्डिङ बोर्ड हटाएर महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउने नाटक सुरु गरेको थियो । पोखरामा परिचय एड्भरर्टाइजिङसँगै आधा दर्जन भन्दा धेरै विज्ञापन एजेन्सीहरुले होर्डिङ बोर्ड राख्दै विज्ञापन गर्दै आइरहेका छन् ।
‘कर तिर्न मात्रै म तीन पटक त महानगर गएको थिएँ,’ बस्याल भन्छन् , ‘हामीले पनि परिस्कृत हुँदै काम गरौँ भनेका हौँ मेरै गोरुको बाह्रै ठक्का भनेका हैनौँ । यसरी महानगर जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।’
स्मार्ट प्रतिक्षालयबारे भ्रम
केही समय अघि महानगरले स्मार्ट प्रतिक्षालय राखिएको भनेर भ्रम फैलायो । महानगरले दाबि गरेको उक्त प्रतिक्षालय स्मार्ट भने होइन । लाइट बोर्ड राखेर बत्ति मात्रै बल्ने बनाइएको छ ।
न त त्यसले घाम छेक्छ, न त पानी नै ओताउँछ । स्मार्ट प्रतिक्षालयको मापदण्ड हेर्ने हो भने यात्रुहरुका लागि तापक्रम, बस आउने जाने समय, रुटलगायतका जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ ।
सम्भावनै सम्भावना स्पोटुरिजमको